यी राशी हुने ब्यक्तिको भाग्य विवाहपछि चम्किन्छ ! जानी राखौँ – Bhindai Kura
यी राशी हुने ब्यक्तिको भाग्य विवाहपछि चम्किन्छ ! जानी राखौँ
By Bhindai Kura May 16, 2020 May 16, 2020
यी राशी हुने ब्यक्तिको भाग्य विवाहपछि चम्किन्छ ! जानी राखौँयो राशी हुने मान्छेको भाग्य विवाहपछि चम्किन्छ ! जानी राखौँ
एजेन्सी । प्रायजसो मानिसहरु विवाह गरेपछि वा विवाह नहुनुअघि निकै नै फरक हुन्छन् । कुनै मानिस विवाह गरेपछि निकै नै खुसी हुन्छन् भने कुनै मानिस निकै नै निराश हुने गर्छन् । त्यस्तै नयाँ जानकारीको लागि यदि तपाईंको नामको अगाडीको अक्षर ही, हू, हे, हो, डा, डू, डी, डे वा डो आउँछ भने तपाईंको राशी कर्कट हो ।
यो राशी हुने मानिसहरुको विवाहपछि निकै नै भाग्य चम्किने ज्योतीष शास्त्रको दाबी समेत रहेको छ । त्यस्तै कर्कट राशी हुने मानिसहरु इमान्दार, जिम्मेवार र कर्तब्यनिष्ठ पनि हुने ज्योतिष शास्त्रले दाबी गरेको छ ।
कर्कट राशी हुनेहरुको जीवनमा विवाहको कुरा चल्दा आफ्ना आमाबाबुले हस्तक्षेप गर्छन् जुन कुरा उनीहरुलाई भने मन पर्दैन् । तर विवाह भएपछि निकै नै सुखी हुन्छन् । कर्कट राशीको मानिसको भाग्योदय विवाहपछि नै हुन्छ ।
युरोप र अमेरिकामा बालबालिकामा दुर्लभ रोगका लक्षणहरु देखियो
गम्भीर रोगको संकेत हुनसक्छ रिँगटा ?? के गर्ने के नगर्ने